Muuqaal: Sarkaalka xisbiga Wadajir wuxuu qaaday tallaabo la yaab leh - Axadle | Axadle
Muqdisho (Axadle) – Daahir C / raxmaan Maxamed, oo ka mid ah booliska Soomaaliyeed ee ku sugan isgoyska Banaadir ee Caasimadda Muqdisho oo toogtay gabdho ka mudaaharaadayay Farmaajo 25-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore, ayaa hadda qirtay dambiga, wuxuuna dalbanayaa cafis.
Gabdhaha uu sarkaalku maalintaas toogtay waxaa ka mid ahayd Deeqo Soomaali oo beryahan baraha bulshada aad looga hadal hayey, kadib markii si aad ah loogu faafiyey sawirro isaga oo qori madaxa ku haya
Wuxuu sidoo kale rasaas ku furay gabdhaha, laakiin ma aysan joojin mudaharaadka ay kaga soo horjeedaan Madaxweyne Farmaajo.
Kulan maanta ka dhacay xaafada xaflada Wadajir ee Caasimadda Muqdisho ayaa waxa uu Daahir C / raxmaan ka raali galiyay gabdhihii uu ku toogtay isgoyska Banaadir dhamaadkii sanadkii hore.
“Maanta waxaan joogaa gurigeyga oo aan kuwada caweynayo, gabdhaha walaalaha ah waxay ahaayeen wax aan gaarnay, Banbaxayaasha oo maraya Muqdisho, kadib toogashada gabdhaha, qaladkan aniga ayaa leh aniga ayaa ahaa, maanta waxaan weydiistay cafis, wayna iga aqbaleen, Saciid Daahir Cabdiraxmaan.
Deeqo Muxudiin oo looyaqaano Deeqo Somali oo goobta kahadashay ayaa sheegtay in Daahir uu raali galin kabixiyay qaladkiisa uuna raali galiyay, iyaguna ay cafiyeen.
“Waxaan maanta garabkeyga taaganahay, walaalkay Daahir, sidaad ogtahay, wuxuu 25-kii bishii hore ee December ku toogtay isgoyska Banaadir, iyadoo aan banaanbax sameyneynay” ayay tiri Deeqo Somali.